Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny kaonferansa indostrialy dia nanangona $ 75,000 ho an'ny Autism Speaks
Tao amin'ny valandresaka eran-tany an'ny American Marketing Group, Inc. (AMG) tao Boca Raton, Florida, ny herinandro lasa teo, dia nivory maraina ny alakamisy maraina ireo mpiasan'ny dia, mpamatsy ary mpiasan'ny AMG mba hanohana ny Autism Speaks.
Ho an'ny taona faharoa, nandray anjara tamin'ny Autism Walk ny vondrona ho ezaka hanapariahana ny fahatsiarovan-tena momba ny autisme ary hanangona vola ho an'ny fikambanana.
Nisy lavanty mangina natao ihany koa nandritra ny fiaraha-misakafo namaranana ny fihaonambe tamin'ny sabotsy hariva lasa teo, izay loka marobe am-polony no natolotry ny mpamatsy tiana kokoa, ary ny fanomezana rehetra dia nizotra mivantana tamin'ny Autism Speaks.
Tamin'ity taona ity, nanangona $ 75,000 mahery ny vondrona tamin'ny alàlan'ny Walk sy ny lavanty mangina natambatra. "Tototry ny fanohanan'ny vondrona marketing amerikana sy ireo mpiara-miasa aminy amin'ny sehatry ny fizahan-tany izahay ary tsy afaka mankasitraka bebe kokoa," hoy i Christie Godowski, talen'ny faritra zokiny an'ny Autism Speaks. "Ny vola voaangona nandritra ny fihaonambe dia handrehitra ny iraka ataon'ny Autism Speaks ary hanampy amin'ny fanatsarana ny fiainana ankehitriny ary hanafainganana vahaolana ho an'ny rahampitso."
"Autism Speaks dia antony iray izay tena akaiky sy tianay indrindra," hoy i Kathryn Burney-Mazza, filohan'ny NEST ary filoha lefitra misahana ny varotra sy serivisy ho an'ny TRAVELSAVERS. “Ary tena nanohina ny fontsika ny valin-kafatra goavambe avy amin'ireo mpamatsy, mpiasa ary mpiasa tianay. Ny fanohanan'izy ireo dia mameno tanteraka ny ezaka ataontsika amin'ny maha mpanohana ny Long Island Chapter of Autism Speaks. Nandritra ny taona maro dia nanangona $ 500,000 ly izahay ary mankasitraka fatratra ny olona tsirairay izay niara-dia taminay, nanohana olona na nanome. ”
Momba ny Autism: Autism, na autisme spectrum disorder, dia manondro toe-javatra maro samihafa miavaka amin'ny fanamby amin'ny fahaiza-manao ara-tsosialy, ny fihetsika miverimberina, ny resaka ary ny fifandraisana tsy misy fitenenana. Fantatsika izao fa tsy misy na iray aza autism fa maro karazana subtypes, ary ny olona manana autism dia afaka manana tanjaka sy fanamby tsy manam-paharoa. Ny ankamaroany dia vokatry ny fitambaran'ny fitarihana ny fototarazo sy ny tontolo iainana, ary maro no miaraka amin'ny olana ara-pahasalamana toy ny aretin'ny GI, ny fanintona ary ny fikorontanan'ny torimaso. Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia manombatombana zaza 1 amin'ny 68 no eo amin'ny lozam-pifamoivoizana.